मोटोपनले हैरान हुनुहुन्छ ? केरा खानुका यस्ता छन् पत्याउनै नसकिने फाइदा – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Intresting/मोटोपनले हैरान हुनुहुन्छ ? केरा खानुका यस्ता छन् पत्याउनै नसकिने फाइदा
मोटोपनले हैरान हुनुहुन्छ ? केरा खानुका यस्ता छन् पत्याउनै नसकिने फाइदा
काठमाडौं – केरा एक स्वादिष्ट फल हो । हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक मानिने केराले औषधिको रुपमा पनि काम गर्छ । यसको नियमित सेवनबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी कतिपय रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
यसमा पाइने भिटामिन सी, भिटामिन बी, रिवोफ्लाबिन, फोलेट, प्यान्टोथेनिक एसिड र नियासिन लगायतका तत्वहरु पाइन्छ । यस्तै पोटासियम, म्यांगानिज, म्याग्नेसियम, तामाजस्ता खनिजहरु पनि पाइन्छ ।
तौल घटाउँछ वा बढाउन – केराले हाम्रो तौल घटाउन वा बढाउन सहयोग पुर्याउछ । केरामा प्रशस्त फाइबर हुने हुनाले पचाउँन सहयोग पुर्याउछ । जसले गर्दा मोटोपन कम हुँदै जान्छ । यस्तै यसले मोटोपन बढाउन पनि सहयोग गर्छ ।
तौल बढाउन दूधसँग केरा खानुपर्छ । दूधले आवश्यक प्रोटीन दिन्छ भने केराले चिनिको मात्रा पुरा गर्छ । जसले सजिलै पच्ने भएकाले कम तौल भएको मानिसले दैनिक ५–६ कोसा केरा खानाले करिब ६ सय क्यालोरीसम्म प्राप्त हुन्छ।
कब्जियतबाट टाढा राख्छ – केराले कब्जियत हुनबाट बचाउछ । केरा खानाले दिसा सजिलो बनाउछ । यसले पाचन प्रणाली पनि सुधार्ने काम गर्छ ।
हड्डी बलियो बनाउने केराले हड्डी बलियो बनाउन सहयोग पुर्याउछ । यसमा फ्रुक्टोलिगोस्याचिराइड हुने भएकाले हड्डी मजबूत बनाउन सहयोग गर्छ ।
रक्तसञ्चारलाई सहज – केराको सेवनले रक्तसञ्चारलाई सहज बनाउछ । यसमा पाइने म्याग्नेसियमले रक्तसञ्चारलाई सजिलो बनाउछ ।रामा पाइने आइरन तत्वले रगतमा हेमोग्लोबिनको उत्पादन बढाउँछ र रक्तअल्पताबाट पनि बचाउन सहयोग गर्छ ।
पेटको समस्या समाधान – केराको सेवन गर्ने गरेमा पेटको अम्लीयपन नष्ट हुन्छ । पखला लागेमा पनि दही र केरा खानाले रोक्न सहयोग हुन्छ ।
यसको गुदिमा बढी मात्रामा केरोटेनाइड्स पाइने हुनाले क्यान्सर, मुटु र मधुमेहबाट बचाउँछ ।